A minster's look at regulation and innovation: A necessity to strike a balance | CoinGenius Hosts Virtual Crypto Event
Ukubuka komnakekeli umthethonqubo kanye nokwenza izinto ezintsha: Isidingo sokushaya ibhalansi
Ideas surrounding DLT first arose in the early 90s, however, it was not until 2009 that the first block of what we now know as blockchain was mined. In 11 short years, blockchain and DLT more generally have had tremendous success in garnering attention from the financial community and the wider public. Just this year, Big Four audit firm Deloitte’s 2020 Global Blockchain Survey found that business leaders now see blockchain as “integral to organisational innovation,” while analytics agency Gartner has ukubikezela that blockchain technology will have generated $3.1 trillion of value-add to companies around the world by 2030.
Similarly in Switzerland, its remarkably progressive stance toward cryptocurrencies and distributed ledger technologies has propelled the country ahead of the pack and closer to its aim of becoming the first “crypto nation. "
In short, there are at least 45 central banks around the world that have publicly evezwe their efforts to develop central bank digital currencies by utilizing DLT. This proves that the appetite to embrace these technologies not only exists among business leaders, it is burgeoning among legislators.
Imibono, imicabango nemibono evezwe lapha iyodwa yombhali futhi ayivezi noma iveze imibono nemibono ye-Cointelegraph.
U-Albert Isola ungqongqoshe waseGibraltar wezinsizakalo zedijithali nezezezimali onesibopho esiyinhloko sokukhulisa iphrofayili yeGibraltar njengesikhungo esilawulwa kahle sezinsizakalo zezezimali, esihola phambili kwi-DLT kanye nomthethonqubo wokudlala online. UNgqongqoshe u-Isola phambilini ubekhonza njengongqongqoshe wezohwebo eGibraltar lapho adlale khona indima ephambili ekuholeni uhlaka lokulawulwa kwe-DLT lwe-Gibraltar, olwethulwe ngoJanuwari 2018 kumafemu asebenzisa i-blockchain ukugcina noma ukudlulisa inani.
Izihloko ezihlobene:20182020zokutholwaanalyticsIziceloukuhlolwaibhangeAmabhangeblockchainUbuchwepheshe beBlockchainBusinessibhange eliphakathiI-Central Bank Digital CurrensetsCentral AmabhangeCommunityIzinkampanicryptoAmamakethe we-CryptoAma-cryptocurrenciesehloniphekileezezimali ezihlukanisiwedigitalzezimali zedijithaliKusatshalaliswa uLedgerubuchwepheshe obuhanjisiwe be-ledgerisakaza ubuchwepheshe bokuhambaDLTUmnothoI-EdgeEzezimalizezimaliOkuyisisekeloNgokuzayogamingGibraltarumnotho wembulunga yonkeUhulumeniNgokuvumelanaIndustryInnovationJULANII-LedgerIsisekeloMarketMarketsONEesidlangalaleniRegulationImithethonqubonabalawuliukulawulaImisebenziSurveyswitzerlandtechnologiesUbuchwephesheUmhlaba
IDeFi Idlulela Ngaphesheya Kwe-Ethereum Njengoba uhlelo lokusebenza lwe-NEO Luthola ama- $ 300M Ngemuva Kokuqalisa
Isazi sezomnotho uNouriel Roubini Unquma Ukulandela i-DeFi
I-Monero Idlule I-LTC ne-BCH Njenge-Payment Cryptocurrency
I-Iran Iba Izwe Lokuqala Lokusebenzisa i-BTC Njenge-Medium Medium
I-Bitcoin akunakwenzeka ukuthi ithinteke ngomphumela wokhetho lwase-US - iGreyScale CEO
Amaphoyisa ase-UK Abutholi Ubugebengu Kumkhonyovu Osolwa Nge $ 3M Crypto 'Staking'
22 amaminithi adlule
IMonero idlule i-LTC ne-BCH njenge-cryptocurrency yokukhokha ngokuya kwedatha eku-chain nedatha yokukhula kwentengo esiyibona izindaba zakamuva ze-Monero.
Abavukuzi be-Monero bahola imali ethe xaxa kunabalingani bakaLitecoin nabakwaBitcoin Cash ngakho-ke izinhlu zobumfihlo zanda phakathi kwabathuthukisi kanye nabasebenzisi bezimali ezigxile ekukhokheni. I-cryptocurrency eyimfihlo isendlula amanye ama-altcoins aholayo. Isibonelo, i-Monero idlule i-LTC ne-BCH njengoba imboni ibheka iso elisha kwimfihlo yomuntu siqu. Imali ephelele kuMonero idlule leyo yeBitcoin Cash ngo-Ephreli noLitecoin emuva ngoSepthemba. Izindleko zokuthengiselana ze-Zcash cryptocurrency elandelayo eyimfihlo edumile ingaphansi kuka-5% we-XMR. Lokhu kukhombisa kuphela ukuthi iXMR inokusetshenziswa kwenethiwekhi okunempilo kuqhathaniswa neLitecoin neBitcoin Cash. UJustin Ehrenhofer, Umphakathi ohola iphrojekthi ye-Monero uthe:
“Kubonakala sengathi kunesiphepho esifanelekile lapho kutholakala khona imali, okuxhasa ukukhokhelwa okuningi kunalokho obekulindelekile phambilini, okuholela ekutheni kube nemali eningi. Kuyindlela enhle yokuthola izimpendulo ezivela ekukhokhweni okuningi okuthuthela eMonero ngezimali zayo ezinkulu ngangokunokwenzeka. ”
Monero (orange) vs Litecoin (grey) vs Bitcoin Cash (blue) vs Zcash (red) inani lemali ekhokhwayo nge-USD. Umthombo Coinmetrics
Kubuye kwaba nokwenyuka okungaguquki kwemali ekhokhwayo emaphakathi yokuthengiselana ku-Monero kusukela ngo-2019. Le metric icishe ibe kahlanu kuya kweziyisishiyagalombili imali ekhokhwayo yokuthengiselana ku-Litecoin. Ubumfihlo bokuthengiselana ku-Monero buvimbele ukuqhathanisa ukubalwa kokuthengiselana nevolumu kulezi zinqubo maqondana. Ukukhuphuka kwemali emaphakathi ku-Monero kukhombisa ukuthi ivolumu yangempela yokuthengiselana ku-LTC inkulu. Lokhu kungenxa yokuthi ngenkathi ukuhola okuphelele kwe-XMR kusuka kwizimali kuyizikhathi eziyi-1.3 zelinye leLitecoin, imali ekhokhwayo, ngakho-ke, iphindwe kahlanu noma kasishiyagalombili ngaphezulu.
Monero (ophuzi) vs Bitcoin Cash (blue) vs Litecoin (red) isilinganiso. imali. Amashadi Omthombo Wolwazi Lomthombo
Imali ekhokhwa ku-Monero iphezulu kuneLitecoin kepha kubiza cishe u- $ 0.007 ukwenza ukuthengiselana kwe-LTC kanye ne- $ 0.05 ukwenza ukuthengiselana kweXMR. Abasebenzisi akudingeki bakhathazeke ngezindleko lapho benza izinkokhelo ze-XMR ngokuhlobene ne-LTC. Ukwanda kwemali ekhokhwayo kusiza ukukhulisa imvelo yezimayini ngaleyo ndlela kuqinise ukuphepha kwenethiwekhi nokuthengiswa kwemali. I-Monero yayidume ngokusetshenziswa kwayo kuwebhu emnyama ngakho-ke yayinganakwa ngenxa yezinkinga zokulawula.
I-push yakamuva ebhekela ubumfihlo evela kubathuthukisi beLitecoin neBitcoin ichaza kuphela ukusetshenziswa okujwayelekile kweMonero. I-Litecoin isivele imemezele ukuthuthukiswa kwayo kobumfihlo Mimlewimble ngo-2021 njengoba u-Ehrenhofer engeza:
"Kukhona futhi okunye okunamandla lapho umphakathi we-cryptocurrency uya ngokuya uthemba futhi uncoma uMonero ngokukhokha kwangasese."
Ngokuhambisana nentuthuko ku-XMR, amanye amathokheni asuselwa kubumfihlo afana neZcash neDash asebenze kangcono ngokuya ngasese ngokuqhathaniswa neBitcoin Cash neLitecoin. Noma kunjalo, le mali yobumfihlo iholela ekuzuzeni unyaka nosuku ngokukhuphuka okungu-175% ngokuqhathaniswa nenye yeZcash 100% kanye no-65% we-DASH.
Izibikezelo ze-DC zingumholi ezigabeni eziningi zezindaba ze-crypto, ezilwela amazinga aphezulu wobuntatheli futhi athobela isethi eqinile yezinqubomgomo zokuhlela. Uma unentshisekelo yokunikela ngobuchwepheshe bakho noma ukufaka isandla kuwebhusayithi yethu yezindaba, zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi nganoma [Email protected]
37 amaminithi adlule
I-Iran iba yizwe lokuqala ukusebenzisa iBitcoin njengendlela yokushintshanisa ngaphakathi kwegunya layo. Lesi sinyathelo size ngenxa yamagagasi avuselelwe amaSanctions wase-US njengoba sifunda okwengeziwe namuhla izindaba ze-Bitcoin.
Ngemuva kwezijeziso ezisanda kufakwa nguMnyango Wezezimali wase-United States ekuqaleni kwaleli sonto, i-Iran iba yizwe lokuqala ukusebenzisa iBitcoin njengendlela yokushintshanisa noma yezindawo eziwela imingcele njengoba imibiko ikhombisile. Uhulumeni wase-Iranian uchitshiyele imithethonqubo ye-crypto ukuze abavukuzi ezweni bakwazi ukuqondisa kabusha ama-cryptocurrensets ngendlela yezimali yase-Iran yezentengiselwano zomhlaba wonke njengoba imali ye-fiat yezwe iqhubeka nokuhlushwa unswinyo lwase-US kanye ubhubhane lwe-coronavirus.
Umthetho ochitshiyelwe ube yisiphakamiso esihlanganyelwe yiBhange Elikhulu Lase-Iran kanye noMnyango Wezamandla wase-Iranian njenge-Iran Mail wabhala, icaphuna umbiko ovela kwi-Islamic Republic News Agency. Umthethonqubo uveze ukuthi kuphela ama-cryptocurrensets akhiwe ngokusemthethweni e-Iran azosetshenziselwa ukuxhasa ukungeniswa kwamanye amazwe kusuka kwamanye amazwe. Lokhu kusho ukuthi abavukuzi be-crypto kufanele bathengise i-BTC emayini ngqo ebhange eliphakathi lase-Iran:
"Abavukuzi kufanele banikeze i-cryptocurrency yangempela ngqo nangaphakathi komkhawulo ogunyaziwe eziteshini ezethulwe yi-CBI."
Isamba somthetho sabavukuzi sizosuselwa ezingeni likagesi oxhaswayo abazowusebenzisa kwinqubo yabo yezimayini nemiyalo evela eMnyangweni Wezamandla futhi. Ukuhweba ngeBitcoin ekuqaleni bekungekho emthethweni ezweni kuze kube unyaka we-2019 lapho uhulumeni ethatha isinqumo sokwakha uhlaka lokulawula ama-cryptocurrensets. Uhulumeni wase-Iran uze wanikela ngamandla akhethekile kubavukuzi ukukhuthaza ukusebenza kwezimayini ze-crypto kodwa futhi nokuqeda amandla izimayini ezingekho emthethweni. Ngemuva kokukhipha amalayisense angaphezu kwe-1000 we-Bitcoin ne-crypto yezimayini imishini ngoJanuwari, uhulumeni umemezele ngenyanga edlule ukuthi bazonikezela ngezinhlelo ezintathu zikagesi kubavukuzi ezweni.
Ngokuvuselelwa kwezijeziso zase-US e-Iran, idola laseMelika lisebenza njengemali yezimoto emakethe yomhlaba ngakho i-Iran ikholelwa ukuthi ukusebenzisa iBitcoin kuzobasiza ukuthi badube imikhawulo ebekwe abaphathi bakaTrump. Lokhu kwenza i-Iran izwe lokuqala emhlabeni ukumemezela i-Bitcoin njengendawo yokushintshisana yamazwe omhlaba kanti amanye amazwe asebenza kanzima ukwenza imali yasebhange ephakathi.
Ukhetho lwase-US ngeke luphazamise umbiko weBitcoin Grayscale othi ukuqwashisa nge-crypto kukhuphukile Ukhetho lukamongameli e-United States sekusele izinsuku ezimbalwa ukuthi lube khona. Ochwepheshe abaningi embonini ye-crypto bagcine ukubheka okungajwayelekile okhethweni oluzayo, bekholelwa ukuthi umphumela walo ngeke ube nomthelela ovunguzayo ku-crypto ethandwayo […]
45 amaminithi adlule
Ukhetho lwase-US ngeke luthinte iBitcoin
Umbiko we-Grayscale uthi ukuqwashiswa kwe-crypto kukhuphukile
Ukhetho lukamongameli e-United States sekusele izinsuku ezimbalwa ukuthi luphele. Ochwepheshe abaningi embonini ye-crypto bagcine ukubheka okhethweni oluzayo, bekholelwa ukuthi umphumela walo ngeke ube nomthelela ovunguzayo kwimpahla ye-crypto ethandwayo.
Abanye abahlaziyi banombono wokuthi impahla ehamba phambili ye-crypto esikhundleni sayo ingaqhubeka ibone i- ukukhula ngokubaluleka kwayo.
UBarry Silbert, isikhulu esiphezulu seGrayscale, unombono wokuthi imiphumela yokhetho ngeke iguqule inqubomgomo kahulumeni yamanje yokunyathelisa enye imali. Lokhu ukholelwa ukuthi kuzoqhubeka nokudlala ngokuthanda iBitcoin.
Imvamisa, lapho uhulumeni ephrinta imali eningi, ujwayele ukukhuphula izinga lokwehla kwamandla emali. UBarry ukholelwa ukuthi le nqubomgomo kahulumeni izokhombisa kuphela ukuthi i-BTC iyisitolo esingcono kunemali ye-Fiat esihlale siyazi.
Umbiko we-Grayscale ukhombisa ukuthi i-Bitcoin isebenza kahle
Umbiko wakamuva we-Grayscale obugxile ku-Bitcoin ukhombisile ukuthi impahla ye-crypto isebenza kahle impela.
Umbiko ungene ukukhombisa ukuthi kunabatshalizimali abaningi baseMelika manje asebezimisele ukwamukela iBitcoin. Njengokungathi i-2019, yi-36% kuphela yabatshalizimali abafuna ukwamukela i-BTC. Njengamanje, inani likhuphuke laya ngaphezu kwama-50%.
Umbiko uqhubeke waveza ukuthi ukhetho oluzayo kungenzeka lungabi nomthelela omubi ekwamukelweni nasekutholakaleni kuka Bitcoin.
Umbiko uphinde waveza ukuqwashisa okukhulayo nge-cryptocurrency emhlabeni. Abantu bazi okuningi ngeBitcoin kunakwiminyaka edlule. Lokhu kwazisa kwenze abantu abaningi bathembela kwimpahla ye-crypto futhi kwaholela nokuthi abantu ababengabaza ukuthi kuzotshalwa imali ku-BTC babe ngabatshalizimali boqobo kuhlamvu lwemali lwe-crypto.
Kwakukhona abatshalizimali be-BTC abayizigidi ezingama-21 ngo-2019. Isibalo sikhuphuke safinyelela kwizigidi ezingama-32 kulo nyaka okhona.